Steeti Of Africa Dijitalụ Mgbanwe [ICT Clinic]
Ọnọdụ mgbanwe ntanetị nke Africa [ICT Clinic]
Home Media Tlọ ọgwụ ICT (Akwụkwọ akụkọ Punch)
in Tlọ ọgwụ ICT (Akwụkwọ akụkọ Punch)
Mgbasa ngwa ngwa nke netwọkụ, ihe mmetụta, ọgụgụ isi, na akụrụngwa gafee Afrịka na-eme ka kọntinent ahụ banye n'ọkwa ọhụrụ.
Taa, anyị na-ekwu maka teknụzụ ndị na - apụta dịka drones, robot, kamera onyunyo, na obodo mara mma; isiokwu ndị na-aghọ ihe atụ na mpaghara Afrika. Na teknụzụ, onye ọ bụla na-enweta oke! Kedu ihe m na-ekwu site na nke a?
Tụlee ihe ndị a: ịnabata ngwa ọrụ dijitalụ nwere ike inye aka mee ka ego gọọmentị na-erite, gbochie nrụrụ aka, ma n'otu oge ahụ, mee ka nghọta doo anya. Maka ụlọ ọrụ mmanye iwu, teknụzụ dị ka sọftụwia ihu na-enyere ha aka ịzaghachi iyi egwu ndị na-eyi ọha egwu.
Maka ndị na-arụ ọrụ na ngalaba ahụike, drones nwere ike ịnapụta ngwa ngwa ahụike iji chekwaa ndụ. Enwere m ike ịga n’ihu, mana m kwenyere na ị hụrụ ebe m na-aga a.
Teknụzụ nwere ikike dị ukwuu, agbanyeghị, dịka o si dị na ihe mmadụ mepụtara, enwere azụ. Ugbu a, echegbula m, mgbanwe dijitalụ abụghị naanị ihe ịtụnanya mana ọ bụ eziokwu anyị, n'agbanyeghị na ọ na-abịa na ọtụtụ ọnụọgụ na ụfọdụ ụgwọ.
Laghachi na ihe atụ ndị gara aga m kpọtụrụ aha, malware ọkaibe na-enyere ụdị mmebi iwu ọhụụ, teknụzụ onyunyo ikike ọhụụ ọhụụ nke ịda mba, drones gosipụtara atụmanya nke agbụrụ ngwa agha na-achịkwa onwe ya ịkpọ aha ole na ole n'ime nsonaazụ ọjọọ nke iji teknụzụ eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
Iji kwuo na ihe ngbanwe kachasị nke dijitalụ n'Africa, ọ bụghị teknụzụ ga-ekpebi ya, mana otu esi eji ya abụghị okwu efu. Ibu ọrụ dị n'aka ndị isi nke mba Africa iji weghara ohere ndị ahụ ma belata ihe egwu metụtara teknụzụ na-apụta.
Ime nke a ga - eme ka obodo ha nweta udo na oganihu kariri. Gịnị kpatara nke a ji dị mkpa?
Ka Africa ka na-alụ ọgụ maka ihe gbasara ọrịa COVID 19, ndị ndu ya nwere ike họrọ iji teknụzụ ọhụụ kwalite nrụpụta gọọmentị, bulie akụnụba na ịza ajụjụ ma kwalite nsonye na ọkwa niile, ma ọ bụ jiri ya dị ka ngwa ọrụ aka ike, okwu nduhie, na esemokwu.
Spreadntanetị gbasaa n'ofe Afrika bụ otu n'ime isi ihe na-akpata uto na akara ngosi nke mmepe teknụzụ nke kọntinent ahụ.
Na 2019, ihe karịrị nde mmadụ 525 n'Africa jiri ịntanetị mee ihe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 75% nke ndị Africa ebu amụma na ha ga-abịa n'ịntanetị site na 2030 ma ọ bụrụ na usoro uto dị ugbu a.
Ugbua, mmụba nke na ịnweta ekwentị mkpanaaka na-agbanwe ka ndị mmadụ si emekọrịta ma na-azụ ahịa n'Africa. Ndị ọchụnta ego dị egwu na-agbatị njikọ ekwentị iji wuo ngwaahịa na ọrụ ndị ezubere maka ndị ahịa Africa.
Agbanyeghị na ngwa ngwa ịgbasa n'ịntanetị n'ofe Afrịka jikọtara ya na ịntanetị dị oke ọnụ, ike ọkụ akwụkwụ na-ekwupụtaghị ịbanye na ntanetị dị ala na obodo ndị nwere obere ego, anyị enweghị ike ịgọnahụ na ọnọdụ njikọ ugbu a na Africa na-eme mgbanwe mgbanwe dijitalụ na kọntinent ahụ .
Site na ọrụ ego na ahụ ike na agụm akwụkwọ, mbido usoro ọgbara ọhụrụ nke Afrika na-emebi ụdị ọdịnala nke nnyefe ọrụ.
Fintechs na ntinye ego
Na mpaghara fintech, okwu a na-eme ugboro ugboro bụ otu esi eme ka itinye ego na-aga nke ọma, na-enye ngwaahịa na ọrụ ego na-akwụghị ụgwọ na ndị nọ na mpaghara ndị a na -achọghị.
N'ihi enweghị ohere ịnweta ụlọ akụ, enweghị ego zuru ezu, agụghị akwụkwọ ego, yana ihe ndị ọzọ, nnukwu akụkụ nke ndị bi na kọntinent ka na-anọghị n'ụgwọ ma yabụ anaghị edebe ma ọ bụ jikwaa ego site na ụlọ ọrụ ego ọdịnala. N'iburu ọnọdụ a n'uche, ọtụtụ ndị mmalite fintech Africa amalitela ọrụ nke idozi ọdịiche itinye ego.
Mwepụta nke nyiwe dịka M-PESA nke Kenya, Remita nke Naijiria na ọtụtụ ndị ọzọ emeela ka Africa gaa n'ihu mpaghara ndị ọzọ iji kwuo ọnọdụ ya dị ka isi iyi nke ekwentị, ego ndị ọgbọ.
N'ikwu okwu banyere otu SystemSpecs si eme ka etinye ego na Naijiria, Ezinne Obikile, onye isi oche na SystemSpecs kwuru nke a:
“Na SystemSpecs, ihe ngwọta anyị niile e wuru n'ezie site na itinye ego na uche. mgbe anyị na-atụle ọdịdị nke ndị ahịa anyị na-ejekwa ozi. Remita, ngwa ahia nke ndi goomenti na ndi ulo oru ndi ozo jiri ya eme ihe, na eme ka ndi na-acho ego n’ime obodo mepere emepe mewe ahia.
N’ichepụta sistemụ ịkwụ ụgwọ anyị, anyị na-akpachara anya itinye ọtụtụ ọwa nnyefe iji hụ na enwere ike ịkwụ ụgwọ maka mmadụ niile.
Anyị arụọla API nke na-enyere anyị aka ijikọ na ụlọ akụ microfinance na ndị na-ahụ maka ego na-agagharị agagharị ka anyị wee nwee ike ịgbatị ọrụ anyị karịa gburugburu ebe anyị nọ n'akụkụ ọ bụla nke Nigeria. O kwukwara.
Africa na teknụzụ na-apụta
Nchịkọta 2020 Government AI Readiness Index nke ndị isi ala UK bụ Oxford Insights bipụtara na-akọ na Africa "na-egwuri egwu na mpaghara nke ọgụgụ isi n'ihi mmepe teknụzụ na-adịghị mma, enweghị akụrụngwa na ndị ọrụ na-adịghị mkpa na ihe ọhụrụ."
Ihe e kwuru n'elu na-ekpughere echiche na ebe ọ bụ na ọtụtụ mba Africa enweghị ego dị ala ma na-agbadata ala na ndepụta nke ike ụwa na teknụzụ, anyị apụla n'ime omimi anyị ịnweta na iji teknụzụ ọhụrụ. Otú ọ dị, nke a bụ eziokwu site na eziokwu.
Ọtụtụ mba Africa na-eji teknụzụ na-apụta dị ka ọgụgụ isi (AI) na drones, n'ụzọ ọhụụ na ọgbaghara.
Ngalaba ndị dị ka ọrụ ugbo, ụlọ akụ, azụmahịa, ozi, ike, ahụike na ihe ndị ọzọ, akụkọ ahụ chọpụtara na opekata mpe ụlọ ọrụ Africa 86 dị na mba 17 na-eji teknụzụ 4IR (AI gụnyere).
Na mgbakwunye, Mauritius, Egypt, South Africa, Seychelles, Tunisia, Kenya, na Rwanda so na mba ndị kachasị elu mgbe gọọmentị dị njikere maka teknụzụ metụtara ọgụgụ isi (AI).
Covid-19 na ihe ohuru ndi ozo
Olee mmetụta ọrịa na-efe efe nke COVID-19 nwere na mgbanwe mgbanwe ntanetị nke Africa? Maka otu, o kpugherela ikike nke ndị na-echepụta ihe n'Africa, si otú a na-agbaso mgbasa nke mgbanwe dijitalụ ngwa ngwa.
Dika ekwughachiri, oria ojoo a ebutego ohuru ohuru. N'ezie, nyocha nke Healthtù Ahụ Ike conductedwa mere na-ekwu na 13% nke teknụzụ ọhụrụ ma ọ bụ nke gbanwere agbanwe na nzaghachi nke COVID-19 si Africa.
Site na, Lifebank, bu nke ụmụnwanyi medtech bidoro bido ulo oru nleba anya na Covid-19 na-anwale ulo oru abuo na steeti abuo na Naijiria nye ndi amaala Ghana bu ndi meputara ebe ana akwo aka, ndi ntorobia Africa na egosiputa na ha di njikere iduzi ndi Afrika. mgbanwe.
Egwu na ọnyà
Ọbụna dịka ndụ na-agagharị n'ike n'ike n'ịntanetị, enwere ohere karịa maka ndị egwuregwu na-emerụ ahụ iji nweta teknụzụ dijitalụ. Ọnwụ cyberatt na mba ndị ọzọ dị n'Africa ebiliwo, ndị omekome na-echegharị ụzọ iji jide ndị na-amụghị anya.
Na mpempe akwụkwọ gara aga na kọlụm ahụ, achọpụtara m njikọ dị n'etiti Covid-19 na ịrị elu na mwakpo cyber zuru ụwa ọnụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ị ga-achọ itughari otu ndị otu na ndị mmadụ n'otu n'otu ga-esi nọrọ na nche maka usoro aghụghọ dị n'ịntanetị.
Dị ka ndị Africa, ọ bụghị naanị na anyị ga-etinye uche na ngwangwa, na mgbe ụfọdụ na-emeghachi omume, nnabata nke teknụzụ ọhụụ iji nweta nkwụsi ike na ọganihu.
Ọ dịkwa mkpa na anyị tụlee ihe egwu na mpụga ndị metụtara iji wee nwee nguzozi n'etiti ihe ọhụrụ, ụkpụrụ, na usoro ziri ezi nke teknụzụ.
Tlọ ọgwụ ICT site na CFA a na-ebipụta kwa izu na Sunday Punch
Tlọ ọgwụ ICT (Akwụkwọ akụkọ Punch)
Na iji teknụzụ na-akwado ahụike na-adịghị mma [ICT Clinic]
Iwu a chọrọ Innovation abtọ Mwepụta Mba, 2020 dị mkpa? IClọ ọgwụ ICT
Kedu ka teknụzụ si agbanwe ọdịnihu ọrụ [ICT Clinic]